किन गर्यो चीन सरकारले अलिबाबालाई झण्डै तीन अर्ब डलर जरिवाना? – Everest Times News
किन गर्यो चीन सरकारले अलिबाबालाई झण्डै तीन अर्ब डलर जरिवाना?
२०७७ चैत्र २८, शनिबार १९:५२
शाङ्घाई (एजेन्सी) । चिनियाँ नियामक निकायले ई–कमर्शको क्षेत्रमा विश्वचर्चित कम्पनी अलिबाबामाथि २ अर्ब ७८ करोड डलर जरिवाना गरेको छ । एकाधिकार नियमहरु उल्लङ्घन गरेको आरोपमा चीन सरकारले अलिबाबामाथि कारबाही गरेको हो ।